ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့် အတွင်းဝန်ဦးအုန်းမောင်၏ဇနီး အာဇာနည်နေ့တွင် တက်ရောက်ဂါ - Yangon Media Group
ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့် အတွင်းဝန်ဦးအုန်းမောင်၏ဇနီး အာဇာနည်နေ့တွင် တက်ရောက်ဂါ
”အမေလည်း အခုနေပြန် ကောင်းနေပါပြီ။ ဒီနှစ်အာဇာနည် နေ့အခမ်းအနားမှာ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးတက်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။အမေလည်း တက်ရောက်ပါမယ်”ဟု အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးအုန်းမောင်(ကွယ်လွန်)နှင့် ဇနီး ဒေါ်သိန်ြး<ွကယ်တို့၏သားဖြစ်သူ ဒေါက်တာမင်းမြင့်က ဇူလိုင် ၇ ရက် တွင် ဝန်ကြီးများရုံးသို့လာရောက် ရင်း ပြောခဲ့သည်။
”ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတုန်း က လုံခြုံရေးအတွက် လူတွေထား ပေးခဲ့ပေမယ့် သူကမလိုချင်ခဲ့ဘူး။လုံခြုံရေးဆိုလုိ့ အဲဒီနေ့က လက် နက်အပြည့်အစုံနဲ့ တစ်ယောက် လောက်ပဲ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လုပ်ကြံသူတွေအတွက်အခွင့်အရေး ရသွားတာပေါ့။ ဒါကိုသင်ခန်းစာယူ ပြီးတော့ အခုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ တွေ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ တို့ရဲ့လုံခြုံရေးကို သေသေချာချာ လေးလုံခြုံရေးပေးဖို့ အကြံပြုလိုပါ တယ်”ဟု ဒေါက်တာမင်းမြင့်က မီဒီယာများကိုပြောသည်။
မြဝတီ-ကော့ကရိတ်တောင်ပေါ်လမ်းတွင် မြေပြိုကျမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုကြောင့် ယာဉ်များပိတ်ဆို့ကာ လမ်းလ??
မယ်ဆိုင်ဂူမှ ကလေးများကယ်ထုတ်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင် ငံမှ အကူအညီတောင်းခံမှုကြောင့် မြန်မာဘက်မ?
ရာသီဥတုညီလာခံမှ ခိုင်မာအကျိုးရှိသော ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာစေရေး အစိုးရများ တွန်းအားပေးရန် ကုလ
နန်စီပွန်ဒေသရှိ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက် ကုမ္ပဏီတွင် ရေမဆေး ကျောက် ရှာဖွေသူများနှင့် လုံခြုံရေး
အောင်လံမြို့နယ် ကျေးရွာလမ်း ၁၁ လမ်းကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် အကူအညီဖြင့် အဆင့်မြှင့် တင်မည်
”ဒီကားဟာ နည်းနည်းလေးတော့ ခေတ်မမီဘူးလို့ ပြောလို့ရပေမယ့်လည်း ခေတ်တော့ မတုံးသေးဘူးလို့ ကျွ?